Aza avela ho afa-baraka ny mpivaro-tena
Manao izany izy ireo mba hisorohana ny lalàna federaly sy fanjakana
Misy marika Craiglist mandeha ao amin'ny tontolo fiara ampiasaina izay mety hahavery anao tampoka. Ny mpivarotra dia mivarotra fiara ho an'ny olon-tsotra ka tsy voatery hanaraka ny fitsipika fiara efa napetraky ny Komity Federal Trade ho an'ny mpivarotra fiara.
Tsy ho fantatrao fa mividy amin'ny mpivarotra fiara ampiasaina ianao mandra-pahavitan'ilay fivarotana. Ankapobeny. Tahaka izany izy ity (ary indroa ny namako iray tao anatin'ny roa taona farany avy amin'ny mpivarotra isan-karazany any Connecticut ary efa ho ny ampahatelony tany Florida!):
Mahita adiresy amin'ny Craigslist ianao ary miantso ny fiara.
Mivory ao amin'ny toeram-ponenana manokana ianao. Ny mpivarotra manenona hira iray ary mandihy momba ny antony hivarotana ny fiara, tsy manambara mihitsy fa mpivarotra izy ireo.
Misy tatitra momba ny tantaran'ny fiara nampiasaina dia hampisehoana ny ahiahiny momba ny fiara nampiasaina.
Na izany aza, dia mpividy entana mora ampiasaina ianao mba hahafahanao manao fanaraha-maso tsy miankina na inona na inona. Tsara raha miaraka amin'ny mpivarotra satria tsy manao na inona na inona ny tatitra fa iza no tompon'ny tompony ankehitriny.
Ny tatitra momba ny tantaran'ny fiara nampiasaina dia tsy mahasalama na tsia . Azo inoana fa nidina avy eo alohan'ny nividianan'ilay mpivarotra ilay fiara - ka tsy halefa ny fifampiraharaham-barotra amin'ny mpivarotra.
Raha tianao ny fiara aorian'ny fanaraha-maso , dia manao ny fifanarahana ianao ary ity mpivarotra mahaleotena mahaleo tena ity dia manaiky ny hahazo ilay fiara voasoratra anarana ho anao. Rehefa mahazo ny taratasy farany ianao, dia manambara fa ny mpivarotra dia "Bill's Used Cars" na zavatra mitovy.
Nahoana ny mpivarotra no manao izany?
Araka ny tatitra momba ny tranonkalan'ny Trade Trade Commission dia ilàna ny mpivarotra ampiasain'ny FTC handefa mpitari-dalana ny mpividy amin'ny fiara rehetra ampiasain'izy ireo hamidy.
Ny Guide Buyers dia manome fampahalalana be dia be, anisan'izany:
na ny fivarotana ilay fiara "toy ny" na miaraka amin'ny fiantohana;
inona ny isan-jaton'ny fanonerana dia hividianana mpivarotra iray eo ambany fiantohana;
ny zava-misy dia sarotra ny mampihatra ny fampanantenany; ary
ireo rafitra maoderina sy elektrika eo amin'ny fiara, ary ny sasany amin'ireo olana goavana tokony hikaroka anao.
Ny mpitari-dalana ny mpividy dia miteny aminao koa hoe:
mahazo ny fampanantenana rehetra amin'ny soratra;
mitazona ny Guide Buyers ho an'ny famerenana ny fivarotana; ary
mangataha ny fiara manamarina ny mpanamboatra mekanika mialoha ny hividianana azy.
Araka ny voalazan'ny FTC, "Tsy mitovy amin'ny vidin'ny mpivarotra ny fividianana fiara iray avy amin'ny olon-tsotra. Izany dia noho ny fivarotana tsy miankina amin'ny ankapobeny tsy voarakotry ny fitsipika fampiasana fiara, na amin'ny" safidy an-tsoratra "amin'ny lalàna momba ny fanjakana. Mety ho "toy ny" izany - ianao dia tsy maintsy mandoa vola amin'izay zavatra tsy mandeha aorian'ny fividianana. "
Araka ny hitanao amin'izao fotoana izao, ny mpivarotra fiara iray dia afaka misoroka aretina maro sy lozam-pifamoivoizana amin'ny alalan'ny fametrahana ho mpivarotra tsy miankina . Tsy azo atao koa ny manara-maso ireo fitarainana Better Business Bureau manohitra azy ireo.
Amin'ny lafiny iray, tsy voafetra amin'ny Craigslist fotsiny aho, azoko antoka, fa izaho kosa manonona izany tranonkala izany satria ao anatin'ny telo monja dia fantatro fa ny fifanakalozan-dresaka dia nanomboka tao amin'ny tranokalam-pifandraisana malaza.
Ny torohevitro? Manaova ny tantaran'ny fiaranao amin'ny fiara rehetra ampiasaina alohan'ny hividiananao azy. Eritrereto ny tranokala roa na telo satria tsy misy tranonkala iray hisambotra ny zava-drehetra.
Aza atokisanao ny tatitra momba ny tantaran'ny fiara efa nomena anao amin'ny mpivarotra iray (na dia mpivarotra franchised frankly) aza. Omeo 30 minitra aho ary azoko atao ny mamorona anao ny tatitra momba ny fahazoan-dalana marina izay tsy mampiseho ny loza sy ny maha-tompon'andraikitra amin'ny vehivavy kely fahiny avy ao Pasadena izay nitondra ny fiara ho an'ny fiangonana alahady.
Tonga amin'ny famaranana aho fa mila mangataka fahazoan-dalana mpamily ianao na famantarana hafa ofisialy avy amin'ny mpivarotra alohan'ny hividianana fiara iray ampiasaina. Google ny anaran'ilay olona miaraka amin'ny teny hoe "fiara nampiasaina." Jereo raha misy zavatra tonga. Mialà amin'ny fifanarahana raha misy izany. Nampiasa mpampiasa fiara marobe nampiova ny fanjakana hatrany amin'ny fanjakana taorian'ny nanamelohana azy fa ny lahatsoratra an-tserasera kosa dia manaraka azy ireny.
Ataovy azo antoka fa mifanaraka amin'ny anarana sy adiresy ny lisitry ny varotra. Hijanona ny olana toy ireo voalaza tetsy ambony.
Plus, tadidio fa tsy hamela ny mpivarotra [raha tsy hoe sehatry ny fisoratana anarana] handefa ny taratasim-pandraharahana ho anao. Izany no nahatonga anao ho tafiditra ao anaty hadisoana toy ity ao amin'ny Craigslist ity.
Raha mahita mpivarotra mivarotra fiarakodia ho an'ny olon-tsotra ianao, dia tatero any amin'ny sampandraharaham-panjakana anao. Mazava ho azy fa tompon'antoka mpandraharaha ara-barotra izay milalao ny rafitra.
Inona no hitranga amin'ny Buy Atoy Hiery Hahazo Hahazo Hira eto
Fividianana fiara efa voamarina efa nampiasaina efa nampiasaina tamin'ny Costco
Ahoana ny fampidirana fiara iray na kamiao ampiasaina avy any Kanada
Famoahana ny fiaran-dalambinao: Tsara kokoa ny mivarotra ny tenanao na ny varotrao?
Manana zo amin'ny lalàna an-dalambe i Californie
Raha tsy misy dikany ny hividianana Pontiac ampiasaina
Mianara rehefa hividy fiara iray ampiasaina amin'ny taona 2020
Cash dia Mpanjaka rehefa mivarotra fiara iray
Hertz Rent2Buy programa fomba vaovao hividianana fiara vaovao
Ahoana no hahatonga anao ho mpangalatra rivo-doza?
Ny fahasamihafana eo amin'ny herin'ny maotera
Facts About Kilimanjaro, tendrombohitra avo indrindra any Afrika
Teny nalaina avy amin'ny Papa Francis momba ny fanavakavahana, ny fanavakavahana ary ny fifindra-monina
Inona ny atao hoe mentalism momba ny erogonomia?
Kalandrian'ny fialantsasatra alemana sy fombafomba - Alemà-Anglisy
10 Dinosaurs Maty Tamin'ny Era Mesozoika
Cal San Bernardino Admissions
Ny antoko Whig sy ny filohany
Azeotrope Famaritana sy ohatra
Ity ve any amin'ny Tendrombohitra Virgo any avaratra?
Ny fivoaran'ny fitantanam-bola Amerikana tany aloha
Fijerena ny rétroque klasika
10 Facts Momba ny Ady Amin'ny Alamo
Miezaha hamantatra ny fitenenana manafina (na vondrona fanampiny)
Nomerao italianina ho an'ny ankizy sy ny vao manomboka
Sandra Gal Fotogalerij
Mihinam-bola ny vola madinika vola vaovao "An'Andriamanitra no itokisantsika"?
Ny olombelona eo amin'ny maso amin'ny Hindu
Misy Mpisolovava ve?
Ohatra iray momba ny fitsapana hipotisy